प्राय सोधिने प्रश्नहरु | महाकुलुङ गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
व्यक्तिगत घटना दर्ताको लागि सूचक को हुन्छ ?
उत्तर: सम्बन्धित व्यक्ति स्थायी बसोबास गरेको वडामा।
कुनै व्यक्तिको भत्ता परिवारको सदस्य वा नजिकको कुनै अन्य व्यक्तिलाई हस्ते गरी दिन मिल्छ की मिल्दैन ?
अघिल्लो आ.व.मा भत्ता लिन नआएका व्यक्तिले चालु आ.व.मा भत्ता पाउँछन् की पाउँदैनन् ?
उत्तरः एक आर्थिक वर्षको भत्ता अर्को आर्थिक वर्षमा वितरण गर्न नमिल्ने भएकोले अघिल्लो आ.व.को भत्ता पाउँदैनन् । त्यस्ता व्यक्तिहरुले असारको २० गते सम्म रकम नबुझेमा त्यस्तो रकम सरकारी ढुकुटी (राजस्व) मा फिर्ता हुन्छ ।
कुनै एक चौमासिकमा भत्ता वितरण गर्दा उपस्थित हुन नसकेको खण्डमा त्यस्तो व्यक्तिले अर्को चौमासिकमा भत्ता लिंदा पहिलाको चौमासिकको भत्ता लिन पाउँछ की पाउँदैन
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिइरहेका व्यक्तिहरुले पनि परिचय पत्र नवीकरण गर्नुपर्दछ ?
के परिचय पत्र नभएका व्यक्तिहरुले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन सक्छन् ?
चालु आ.व.को मंसिर १५ भन्दा पछि उमेर पुग्ने व्यक्तिले कहिले निवेदन दिनुपर्दछ ?
उत्तरः सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनको लागि जेष्ठ नागरिकहरुले हरेक आर्थिक वर्ष (श्रावण देखि आषाढ मसान्त सम्म) को मंसिर १५ भित्र सम्बन्धित वडा वा गाउँपालिका/नगरपालिकाको कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्दछ । तर एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु तथा बालबालिकाहरुको हकमा जहिले सुकै निवेदन दिन पाइन्छ।
कुन कुन अवस्थामा दोहोरो भत्ता लिन पाईदैन ?
नागरिकतामा जन्मेको साल खुलेको तर गते र महिना नखुलेको अवस्थामा केलाई आधार मानिन्छ ?
उत्तरः जन्मिएको साल खुलेको तर महिना र गते नखुलेको भए वा उमेर मात्र उल्लेख भएको भए सम्बन्धित वर्ष(साल) को चैत्र मसान्तलाई आधार मानी जन्म मिति गणना गरिनेछ ।
विवाह भएमा त्यस्ता व्यक्तिको लगत स्वत.. काटिने र निजहरुले भत्ता प्राप्त गर्ने छैनन् ।